အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းအောင် Hyundai နဲ့ Kia တို့ရဲ့ အမေရိကဈေးကွက် အတွင်းအောင်မြင်မှု! – MyMedia Myanmar
အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းအောင် Hyundai နဲ့ Kia တို့ရဲ့ အမေရိကဈေးကွက် အတွင်းအောင်မြင်မှု!
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ Hyundai ဟာ တကယ်ကို အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းတယ် ဆိုပြီး Honda ကုမ္ပဏီ ရဲ့ Chief Executive ဖြစ်သူ Takanobu က ဆိုခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၎င်းကပဲ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီဟာ တကယ့်ကို သတိထားစရာ ပြိုင်ဘက် ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာပြီ ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေက သက်သာသလောက် အရည်အသွေးက ပိုပြီး တိုးတက်လာလို့ပါပဲလို့ အကြောင်း ပြချက် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ ယခင်တုန်းကလည်း ဂျပန် နာမည်ကြီး ကား ကုမ္ပဏီ Toyota ကိုယ်တိုင် က Hyundai ရဲ့ တိုး တက်လာမှု တွေနဲ့ ရေရှည် ရည်မှန်းချက် တွေ အကြောင်းကို အတော်လေး အလေးပေး ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ဂျာနယ်လစ် တစ်ယောက် ရဲ့ အမေးကို အမေရိကမှာ ရှိတဲ့ Toyota Motor Sales ရဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ Yukitoshi Funo က ဖြေကြားခဲ့ရာမှာ Hyundai ရဲ့ တိုးတက်လာမှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး စိုးရိမ် မိပါတယ် လို့ကို ဆိုထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် အမေရိက ဈေးကွက်အတွင်း Toyota ရဲ့ အဓိက ပြိုင်ဘက်တွေဟာ Honda Motor ၊ Nissan Motor နဲ့ Hyundai တို့ ဖြစ်လာပြီလို့ ၎င်းကဆိုခဲ့ပေမယ့် Hyundai ဟာ ပိုပြီး သတိထား စောင့်ကြည့်ရမယ့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ ပိုမို အလေးပေး ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် တော့ ၂၀၂၀ လည်း ကုန်ဆုံး သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ကာ JD Power ရဲ့ အဆိုအရတော့ Hyundai နဲ့ အတူ မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တဲ့ Kia တို့ ဟာ သူတို့ရဲ့ အမေရိက ဈေးကွက် ဝေစုတွေကို အခြားသော လုပ်ငန်းတွေထက် ပိုမိုယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ကထက်ပင် သာလွန်ခဲ့ ပြန်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ တုန်းကတော့ Hyundai Motor Company ရဲ့ Retail Sales တွေမှာ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း လောက် အထိ ကျဆင်း ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်မှာတော့ Kia ဟာ ပုံမှန်း အတိုင်းဆက်လက် ရောင်းချနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Wall Street Journal ရဲ့ သတင်း တစ်ချို့ အရတော့ အခုလိုမျိုး ၂၀၂၀ အစပိုင်းမှာ အားလုံးစတင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ကစလို့ Hyundai နဲ့ Kia တို့ ရဲ့ Stock ဈေးကွက်တွေဟာ ပူးပေါင်းပြီး ပြန်လည် မြင့်တက် လာသလို နှစ်ကုန် ပိုင်းမှာတော့ အခြားသော ဈေးကွက် ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ General Motors နဲ့ Volkswagen AG တို့ ထက်တောင် သာလွန်အောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒီလို အခြေအနေ တွေကြောင့်မို့ Customers တွေရော စီးပွားရေးပညာရှင်တွေက ပါ Hyundai ကုမ္ပဏီ ကို လျှော့တွက်လို့ မရတော့ပဲ မော်တော် ကားဈေးကွက်ထဲမှာ အနိမ့်ပိုင်း က‌ဆိုပြီး သတ်မှတ်လို့ မရတော့တာကို သဘောပေါက်လာကြပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ ၂၀၂၀ ကို ကား ကုမ္ပဏီ အများ အပြားက ကျရှုံးရတဲ့ နှစ်လို့ တံဆိပ်တပ်ကြမယ့် အချိန်မှာမှတ်တမ်း တွေအရတော့ အခုလို အခက် အခဲ ထဲမှာတောင် Hyundai အနေနဲ့ ဘယ်လို သိသာထင်ရှားတဲ့ အချိုးအကွေ့တွေ အဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ သလဲဆိုတာကို သက်သေထူနေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ တောင်ကိုရီးယား ကား ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့တော့ ကပ်ရောဂါကာလ ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာ ဈေးကွက်အတွင်း တန်ဖိုး ရှိရှိ ဆက်လက် ရပ် တည်နိုင်ဖို့ အတွက် ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကားတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ပိုင်းကို ပိုမို ဦးစားပေးခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အသစ်ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပြီး အဆင့်မြှင့်တင် ထားတဲ့ ယာဉ်တွေ ဖြစ်တဲ့ Kia Telluride နဲ့ Hyundai Sonata တို့ဆိုရင် အရည်အသွေး ပိုင်းနဲ့ ဒီဇိုင်း ပိုင်းတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်ဟန် တစ်ခုနဲ့ အတော်လေး ကောင်းမွန်ကြောင်း ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်း မှာ ပဲ Hyundai ဟာ သူတို့ရဲ့ N Performance Brand ကိုလည်း အကောင်းဆုံး တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဂျာနယ်လစ် အတော် များများနဲ့ ကားလောက ကို စိတ်ဝင်စားကြသူတွေကို အကောင်းဆုံး ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ အခုလာမယ့် ၂၀၂၁ ကလည်း ကပ်ရောဂါ အတွက် ကာကွယ် ဆေးတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းသာ စတင်ရရှိလာကြမှာ ဖြစ်လို့ သိပ်ပြီး ထူးမခြားနား အခြေအနေ တွေနဲ့ ပုံစံသစ် အတိုင်းပဲ ဆက်လက် ဖြတ်သန်း ကြရဦးမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဝယ်ယူသူ ဘက်က နေ ကြည့်မယ် ဆိုရင် Kia ရဲ့ တကယ့်ကို ထူးခြား ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေး မြင့်ထုတ်ကုန်တွေ ကြောင့်ပဲ ပိုပြီးတော့ အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်တဲ့ အနေအထား တွေကို ရရှိဦးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ခန့်မှန်း ရပါတယ်။
The post အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းအောင် Hyundai နဲ့ Kia တို့ရဲ့ အမေရိကဈေးကွက် အတွင်းအောင်မြင်မှု! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-05T20:39:40+06:30January 5th, 2021|MYCARS MYANMAR|